Maalinta: Juun 18, 2017
Akjaray'a sharka xun wuxuu ahaa qiimo taraam ayaa tagay wadada
Akçaray ayaa taabanaysay… Tareenka wuxuu ku sii jeeday wadada: Akçaray, oo ay hirgalisay Kocaeli Metropolitan Municipal oo u adeeg adeeg shalay, ayaa kusii nagaaday koronto la'aan dariiqyada. Muwaadiniinta gudaha taraamka ah ee aan albaabada u furin sababo farsamo darteed [More ...]
Joogsiga baska ugu horreeya ee raaxo leh ee Kocaeli: Joogsiga baska cusub ee raaxada leh ee laga dhisay Umuttepe, halkaas oo Jaamacadda Kocaeli ku taal, ayaa loo furay adeegga. Iyada oo laga qaadayo joogsiga ku meel gaarka ah albaabka A hortiisa, joogsiyada qaboojiyaha ayaa la furay halkii dantii laga lahaa [More ...]
IZBAN heerka khatarta heerka khatarta ah ayaa la xidhay
Xariiqda IZBAN ee halista goynta ayaa xiran: khadka IZBAN ilaa inta laga shaqeynayo halista Tepeköy'e khatarta ayaa inta badan lagu muujiyaa isgoyska heerka. Kadib shilka qorsheysan ee isgoyska heerka, marinka ayaa loo xiray taraafikada. isgoyska [More ...]
Talaabo cusub oo loogu talagalay gaadiidka Kocaeli ee Akçaray ayaa bilaabay ololaheeda Kocaeli
Akçaray, oo ah nidaam tareenka fudud oo ay hirgalisay Kocaeli Metropolitan Municipal County, ayaa bilaabey adeegga. Tareenka, oo u adeegi doona inta udhaxeysa boosteejada baska iyo SEKA park, ayaa bilaabay safarkiisii ​​ugu horreeyay maanta. Wasiirka Gaashaandhigga Qaranka Fikri Işık safarkii ugu horreeyay ee Akçaray [More ...]
Maanta taariikhda: 18 June 1856 Gacanka Iskenderun ee England ...
Taariikhda Maanta 18 June1856 Mashruuca Chesney, oo gaari doona Mesopotamia laga bilaabo Khaliijka Iskenderun, England, wuxuu gaari doonaa gees ama Basra marinka isgoysyada Tigris iyo Yufraad. Wadada Wadada Weyn Yufraad ee London [More ...]